Szọ anyị ji arụ ọrụ mgbakwunye anọ anyị na-enye ohere ka mma na azụmaahịa anyị maka azụmahịa dị mma. Njem nleta na-ebute ihe dịka 65% GDP ma guzosie ike dịka onye na-enweta mgbanwe mgbanwe mba ofesi kacha elu.
Industrylọ ọrụ na-ewu ewu nke abụọ na Saint Lucia bụ ọrụ ugbo.
Saint Lucia mebere Iwu agbakwunyere 15% na 2017, na-eme ka ọ bụrụ mba ikpeazụ na Eastern Caribbean na-eme ya. N’ọnwa Febụwarị 2017 Saint Lucia belatara Taxtụ Isi agbakwunyere na 12.5%.